एमाले सांसदले ‘बाँदर’ भनेपछि संसदमा हंगामा, कांग्रेस सांसदले गरे बबाल ! – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / एमाले सांसदले ‘बाँदर’ भनेपछि संसदमा हंगामा, कांग्रेस सांसदले गरे बबाल !
एमाले सांसदले ‘बाँदर’ भनेपछि संसदमा हंगामा, कांग्रेस सांसदले गरे बबाल !
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर August 16, 2017	Comments 51 Views
काठमाडौं, ३२ साउन । नेकपा एमालेकी सांसद ममता गिरी व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा ‘बाँदर’ शब्द प्रयोग गरेपछि हंगामा भएको छ ।
एमालेले सदनमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको सन्दर्भमा सत्तापक्षबाट विरोध भएको भन्दै सांसद गिरीले ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन्, र अरुको घर पनि बन्न दिँदैन्’ भन्दै टिप्पणी गरेपछि सत्ता पक्षबाट प्रतिवाद भएको थियो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । उनले ‘बाँदर’ शब्द रेकर्डबाटै हटाउन लगाएका थिए ।
संसदमा बोल्दै ममता गिरीले भनिन्ः
यहाँ सुनियो, संदनमा प्रतिपक्षीले राजनीति गर्यो। सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्यो भनेर भन्ने टिप्पणी सुनियो । मुलतः सत्ता पक्षबाट हामीले सत्ता पक्षलाई सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नल्याउनु कसैले भनेको थिएन् । किन उहाँहरुले ल्याउनुभएन् । अनी प्रतिपक्षले ल्यायो भन्दै गलत ढंगले व्याख्या र टिकाटिप्पणी गर्नु के यो जायज हो । भनिन्छ बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन्, र अरुको घर पनि बन्न दिँदैन् । यो टिप्पणी यस मानेमा सहि हुनसक्छ । ममताले यति बोल्दा एमालेका सांसदहरु हाँसिरहेका थिए ।
त्यसपछि प्रतिवाद गर्दै रामहरि खतिवडाले भनेः
यो संसद भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हो । कोही बाँदर बन्ने शब्दको प्रयोग भयो, असंसदीय शब्द हो । र यो रकेर्डबाट हटाइयो भन्ने अनुरोध गर्दछु । संसदमा भएका मान्छेलाई बाँदर भनेको हो भने घोर आपत्ति छ । यो संसदीय शब्द होइन् । यो डिलेट गरियोस् । रामहरि खतिवडाले यसो भन्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले ताली पिटेका थिए ।
Previous: निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: प्रदेश र संसदको चुनाव एकैपटक गर्न सकिन्छ ?
Next: भरतपुर आजबाट हर्न निषेधित क्षेत्र